Wethuse abathandi bobumnadi eqopha ingoma uDOT - Ilanga News
Home Izindaba Wethuse abathandi bobumnadi eqopha ingoma uDOT
Wethuse abathandi bobumnadi eqopha ingoma uDOT
UTHANDO lwezingane lwenza intokazi yase-5 Ways, eMpangeni ethuse abathandi bobumnandi ngesikhathi yenza i-video yengoma yayo ethi‚“Makoti” ngesikhathi kuvela umlingisi onogazi ezintokazini, uNaymaps Maphalala, kungathi ushada nayo ibenesifiso sokuvula indawo yezintandane uma kwenzeka izinto zihamba kahle empilweni yayo.
UNomcebo “Dot” Mthethwa (23), ongenise ngezinkani kwezikaqedisizungu njengoba eke wabonakala nasemdlalweni owuchungechunge, u-Uzalo edlala indawo kaNandi, uthi njengomuntu omusha, unamaphupho amaningi, elinye lawo okuyile ndawo okuzogcinwa kuyona izintandane, zinakekelwe.
Uthi ukuvalwa kwezwe kufane nesibusiso kuyena njengoba enze izinto eziningi ngalesi sikhathi, kubalwa nokuba ngomunye wabethuli bezinhlelo esiteshini somculo iTrace.
Le ntokazi yaqeda umatikuletsheni eZiphozonke High School, eMatshana, eMpangeni yenza iziqu zabummeli e-University of KwaZulu-Natal (UKZN). Nokho ngonyaka wesibili yashiya phansi yenza iziqu zeDrama and Performance Studies kuyona le nyuvesi.
“Ngenza iziqu zomthetho nje, ngabazali bami ababefisa ukuba ngizenze ngoba bebone ukuthi ngaphumelela kahle kumatikuletsheni. Ngathi sengenza unyaka wesibili, ngaqala ngangena emkhakheni wezokulingisa nokucula, okuyilapho babona khona ukuthi ngizimisele ngokuba kulo mkhakha.
“Kuyimanje ngenza unyaka wesine, ngizimisele ngokuqhubeka nemfundo ngisho ngingaphumelela kangakanani empilweni,” kusho yena.
Uthi ubengakaze azitshele ukuthi angakwazi ukwethula izinhlelo. Le ntokazi isayine ngaphansi kwenkampani yaseNigeria, iPanda Records kanti ithi lokhu kuzoyibeka ethubeni lokuthi ikwazi ukusebenzisana nabanye abaculi bakuleliya lizwe.
UNomcebo uthi kule video yeMakoti, ukhethe uNaymaps ongumngani wakhe ngakho ukuthi izintokazi eziningi ziyazifela ngaye. Ngaphambi kwale ngoma, ukhiphe ethi, “Volcano” ayenze noMadanon neDistruction Boys.
“Kuyimanje ngimatasa estudiyo ngihlanganisa i-albhamu ezophuma ngoNdasa (March) wonyaka ozayo. Ngiyethemba ukuthi abantu bazoyithokozela.” esho.
Previous articleKuvuleke iminyango enikwa uhlelo
Next articleSibona sakhelwa itulo isikhulu sePMB Utd